Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Tijaabada Caafimaadka Shiinaha - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Tijaabada Caafimaadka
Alaabooyinka Tijaabada Caafimaadka waxa loo isticmaalaa ogaanshaha qaybaha kiimikaad, haraaga dawada, noocyada fayraska iyo sanduuqa reagents kiimikaad kale. Isbitaalada guud, shirkadaha dawooyinka ee la isticmaalo.
Alaabooyinka Tijaabada Caafimaad ee degdega ah waa kuwo tayo ahaan la isku hallayn karo waxayna leeyihiin noocyo kala duwan oo alaab ah oo ay ka mid yihiin baadhista ku xadgudubka daroogada, baadhista bacriminta, baadhista cudurada galmada lagu kala qaado, baadhista cagaarshowga, baadhista habdhiska dheefshiidka, baadhista neefsiga iyo baadhista cudurada faafa ee kulaylaha.
Isticmaalka sayniska ee alaabta Tijaabada Caafimaadku waa cabbir muhiim ah si loo hubiyo badbaadadayada shakhsi ahaaneed iyo caafimaadkayaga. Bailikind daryeelka nolosha iyo caafimaadka!
Isticmaalka Daawada Qaaxada (TB)-IgG Degdeg ah M. Qaaxada Hal Talaabo oo Tijaabo Degdeg ah
Isticmaalka daawada Qaaxada (TB) -IgG degdeg ah m. qaaxada hal tallaabo oo xariijimo degdeg ah: Baarista shaqada sambabada waa mid ka mid ah baaritaanada lagama maarmaanka u ah cudurada neef-mareenka. Inta badan waxaa loo isticmaalaa in lagu ogaado dhufashada mareenka neefsiga iyo xajmiga awoodda sambabada. Si loo ogaado goor hore ee dhaawacyada sambabada iyo marin-haweedka, waxaa loo isticmaalaa in lagu qiimeeyo darnaanta iyo saadaasha cudurka, qiimeynta waxtarka daawooyinka ama hababka kale ee daaweynta, iyo aqoonsiga sababaha dyspnea. Waa qiimo weyn oo caafimaad in la baaro goobta dhaawaca, la qiimeeyo dulqaadka shaqada sambabada ee shaqada ama xoogga foosha, lana socdo bukaanka aadka u xanuunsan.
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Tijaabada Caafimaadka oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Tijaabada Caafimaadka soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Tijaabada Caafimaadka la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.